Yeyiphi eyona Midlalo miBalaseleyo kuPhawu lwakho lweZodiac? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Yeyiphi eyona Midlalo miBalaseleyo kuPhawu lwakho lweZodiac?
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kutyhila ulwazi malunga nobuntu bakho kubandakanya nemidlalo ekufuneka uyidlalile ukuze ubenemilo. Nguwuphi umdlalo olungele uphawu lwakho lwe-zodiac?
Nokuba uqheleke wedwa okanye nabanye, nokuba kufuna ingqwalaselo okanye unyamezelo, ukusebenza ngaphandle kwenza wonke umntu azive onwabile. Nangona, kuba sahlukile, asinabo bonke umbono ofanayo wezemidlalo. Abanye bakubona njengendlela yokuphumla, abanye njengendlela yokuziva bephila, kwaye abanye njengendlela yokonwaba. Kwimeko nayiphi na into, abanye abantu bayonwabela ngakumbi kunabanye. Izizathu zokuba sithande imisebenzi ethile kwaye sibathiye abanye zihlala zibuyiselwa kwiimpawu zethu ze-zodiac. Ngaba kufanelekile ukuba ukhethe umsebenzi onamandla aphezulu okanye uye kwinto ethile ezolileyo? Yilungele ukutshisa ezinye iikhalori!
Yonke imiqondiso ye-zodiac yahlukile oko kuthetha ukuba ii-Aries azizukuthanda umdlalo ofanayo neCancer umzekelo. Ngeendlela ezahlukeneyo zokhetho, umdla kunye neemfuno, kukushiya phi oko? Ngaba uyathanda ukubila iityhefu kwindawo yokwenza umthambo okanye ngaba ungaphezulu kwebhedi yetapile kunenye into? Fumana iimpahla zakho zokuzilolonga kwaye ulungele ukumpompa isinyithi!
Imidlalo efanelekileyo kuwe ngokuvumisa ngeenkwenkwezi
Thatha enye indlela yokujonga imeko yakho yokomelela komzimba kwaye ubandakanye umdlalo omtsha ohambelana neemfuno zakho kunye nezinto ozithandayo. Nje ukuba ufumanise ukuba yeyiphi eyona midlalo ilungileyo kuwe, ukusebenza akusayi kuphinda kube ngathi ngumsebenzi! Ukuba kwelinye icala awufumani sizathu sokunyusa izinga lokubetha kwentliziyo yakho, jonga uphawu lwakho olukhulayo kwaye ufunde ngakumbi malunga nawe.
Sukela amaphupha akho ngoncedo lwePsychic!
Owona mdlalo ungcono, weeAries
Njengesiqhelo iiAries, kufuneka usoloko ushukuma! Isantya , adrenaline , kunye nentwana ye ingozi iyakutsala . Imidlalo equka ukutyibilika, ukulwa, okanye isenzo esikufanelayo ngokugqibeleleyo (njenge Ukuskiya , umbhoxo , umdlalo wamanqindi , ukuqhuba ibhayisekile , okanye intenetya ). Ukuthiyile ukuphulukana nolu khuphiswano uya kwenza konke okufunekayo ukuze uphumelele.
Owona mdlalo ungcono, iTaurus
Imidlalo yamandla asezantsi
I-Taurus, ujika kude nesantya, ingozi, ubundlobongela kunye nokhuphiswano. Wena khetha imisebenzi ezolileyo njenge igadi , Igalufa , iyoga , okanye nayiphi na umzamo ophantsi ezemidlalo!
Owona mdlalo ungcono, iGemini
Gemini, ukhetha ukukhuthaza ii-neurons zakho ngaphezu kwemisipha yakho, kodwa ukuba wenza imidlalo ethile, kuya kufuneka utshintshe imisebenzi rhoqo ukuze ungadikwa. Uyathanda imidlalo efuna ubuchule , njenge itafile yethenini , I-squash , ukudanisa , okanye ukubaleka .
Eyona midlalo ilungileyo yeCancer
Umhlaza, ikhaya apho intliziyo yakho ikhona! Uyathanda ukwenza iiprojekthi ze-DIY, ukwenza igadi, okanye ukubuyisela ifanitshala endala, kodwa xa uphuma, wena Yonwabele nantoni na enxulumene namanzi : uhamba kwindlela yebhodi , ukuloba , ukuqubha , snorkeling , ukuntywila njl.
Owona mdlalo ungcono, uLeo
'Leo ukuqina komzimba kunye nokuphuphuma kwamandla kubenza bakwazi ukufikelela kwimidlalo yokwenene. Uyazingca ukubaleka , ukukhwela ihashe , ukuphosa umkhonto … Ngokufutshane, wonke umsebenzi weembaleki.
Owona mdlalo ungcono, iVirgo
IVirgo unobukrelekrele ngakumbi kunokuba usebenza, kodwa ukuba ufumana umdlalo onomdla kuwo, uya kuba yomelezwa kukubaleka ngokuzonwabisa okanye ukuphakamisa umlenze .
Owona mdlalo ubalaseleyo, iLibra
Libra, uluthiyile ubundlobongela kunye neenzame ezinzulu, kungoko ekuphela kwesizathu esinokukunyanzela ukuba wenze umdlalo iya kuba kukuma ubumbene! Ukhetha ukufumana umdlalo onomtsalane njengaye umdaniso , into sisikeyiti , intenetya , okanye ukuqubha okuhambelanayo .
Owona mdlalo ubalaseleyo weScorpio
Imidlalo yokwakha amandla
IScorpio, ezemidlalo lelinye lamaxesha owathandayo, kwaye uyi ukunyanzelwa ukuba kubalwe ! Imeko yakho yomzimba ihlala ichukumisa abanye abakhuphisana nabo. Uthanda ukhuphiswano kwaye ugqwese kwezemidlalo ezisebenzisa amandla kunye nonyamezelo njengaye marathons , umdlalo wamanqindi njl.
Owona mdlalo ungcono, weSagittarius
I-Sagittarius, uyasebenza kakhulu, ke unemisebenzi emininzi eyenzekayo ngaxeshanye! Uyawuthanda nawuphi na umsebenzi okwenza ukuba uhambe, nokuba kukwiqela okanye nguwe. Ungagqwesa ibhola yomnyazi , imidlalo yamahashe , ibhola ekhatywayo , okanye ukuqhuba ibhayisekile .
Owona mdlalo ungcono, iCapricorn
ICapricorn, ukhetha ukuzikhetha ukuze ufunde kwaye ufunde izinto ezintsha, ukuze ungakuboni ukubaluleka kwezemidlalo, kodwa xa uthatha inxaxheba kwimithambo yomzimba, ubonakalisa isipho kuwo nawuphi na umdlalo ubungqongqo kunye noxinzelelo , njengegalufa, ukutola ngomlilo , ukukhwela ilitye , Ukuskiya , okanye ukubaleka .
Owona mdlalo ungcono, u-Aquarius
U-Aquarius, ngokunyanisekileyo, ezemidlalo ayisiyo indebe yakho yeti kuba ungathanda nantoni na enobuchwephesha, kwaye ungadlula ngeempelaveki uchithe ixesha nezixhobo zakho. Ukuba uthatha isigqibo sokwenza nayiphi na imidlalo, khetha enye ngaphandle njenge ukubaleka , ukunyuka intaba , ukundiza uxhonyiwe njl.
Owona mdlalo ungcono, iPisces
Iipisces, uthanda uxolo, ke ezemidlalo ayisiyiyo inkanuko yakho yokuqala. Ukuba ukhetha enye, khetha umdlalo onxulumene namanzi ukuqubha , ukuhamba ngomkhumbi , nzulu yolwandle njl.
Eyona midlalo ilungileyo kuwe
Cofa ukuze ufumane eyakho! IiAries ITaurus IGemini Umhlaza Leo Intombazana ILibra IScorpio Isagittarius Capricorn U-Aquarius intlanzi
Kutheni le nto imiPhawu ePhikisayo Kwivili leZodiac Itsaleleke komnye nomnye?
Izizathu ezi-5 zokuwa kwiCapricorn eKhathalayo
ukuthini u-333 kubalo lwamanani
Ufuzisela ntoni u-777
zithini iimpawu ezintsha ze-zodiac 2016
Scorpio zodiac uphawu olunentsingiselo